Tonga omaly, teny Ivato : hiantso fandraisana andraikitra momba ny hanoanana i Ban Ki-moon | NewsMada
Tonga omaly, teny Ivato : hiantso fandraisana andraikitra momba ny hanoanana i Ban Ki-moon
Nigadona, omaly, teny amin’ny Bani Ivato ny sekretera jeneralin’ny Firenena mikambana, Ban Ki-moon mivady ary ireo delegasiona notarihiny. Maromaro ireo fihaonana sy fitsidihana ataony ato anatin’ny roa andro.
Anisan’ny handray ny sekretera jeneralin’ny ONU, Ban Ki-moon, anio etsy amin’ny lapa maitso Anosikely, ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanna Honoré sy ny filohan’ny Antenimierampirenena, Rakotomamonjy Jean-Max. Hiompanan’ny lahateniny amin’izany ny tatitra momba ny « Sandan’ny hanoanana eto Madagasikara». Fantatr’ity olo-maventy maneran-tany ity, araka ny tatitra tonga any aminy ny laharan’i Madagasikara eo amin’ny fahantrana. Tsy azo ihodivirana fa tafiditra ao anatin’izany ny kere sy ny tsy fanjarian-tsakafo iainan’ny Malagasy an-tapitrisany. Hiantsoany ny fandraisana andraikitry ny mpitondra izany. Nametraka ny Tanjon’ny fampandrosoana maharitra (ODD), rahateo ny ONU momba ny ady amin’ny fahantrana.
Hitohy amin’ny fihaonany amin’ireo eo anivon’ny fiarahamonimpirenena, miahy ny zon’olombelona sy ny sehatra tsy miankina, misahana ny maha olona ary koa ireo mpiara miombona antoka ho an’ny fampandrosoana an’i Madagasikara izy.
Ireo Nosy manodidina sy ny fifindra-monina avy any Syria
Horaisin’ny filoha Rajaonarimampianina, eny Iavoloha ny tenany, aorian’izany. Hanao valandresaka amin’ny mpanao gazety ny roa tonta avy eo.
Tombanana fa ho voaresaka ny momba ny fifindra-monina, miainga avy any Syria noho ny ady. Ny momba ireo Nosy manodidina eo an-tanan’i Frantsa ; ny fiainam-pirenentsika sy ny zon’olombelona… Hifanindran-dalana amin’izany ny fitsidihan’ny vadiny, miaraka amin’ny vadin’ny filoham-pirenena ny hopitaly etsy Befelatanana sy ny Foibe fanofanana ny vehivavy eny Tsimbazaza ary koa ny CDA eny Andohatapenaka. Hotsidihan’i Ban Ki-moon koa ireo tetikasa, novatsian’ny ONU vola sy ny hifampiresahany mivantana amin’ireo mpahazo tombontsoa.
Tsiahivina fa nigadona, teny amin’ny Bani Ivato tamin’ny telo ora ny delegasion’ny ONU, notarihin’ity olobe ity. Nitondra azy ny fiaramanidina manokan’ny Onu, UN C-GIXR, niainga avy atsy amin’ny Nosy Maorisy. Nitsena azy ny filoham-pirenena sy ny lehiben’ny andrimpanjakana ary koa ireo mpikambana amin’ny governemanta. Teo koa ny solontenan’ny ONU eto amintsika, Violette Kakyomya.
Nandia ny karipetra mena izy mivady raha vao nidina ny fiaramanidina. Noredonin’ny mpitsoka mozikan’ny tafika ny hiram-pirenena. Nisafo ny andian-tafika avy eo izy sy ny filoham-pirenena. Nijery minitra vitsy ny fampisehoana ny kolontsaina malagasy nataon’ny tarika mpanao vakodrazana, Bakomanga avy eo.
Noraisin’ny ben’ny Tanànan’Antananarivo
Niarahaba ireo mpitondra eto amintsika sy ny ben’ny Tanànan’i Ivato, taorian’izany. Nitohy tao amin’ny efitra fandraisam-bahiny izany. Nifampidinika 10 minitra teo ho eo ny roa tonta sady fotoana nakan’ny mpanao gazety sary.
Nihazo an’Antananarivo, nanao rodobe avy eo ny rehetra. Noraisin’ny ben’ny Tanànan’Antananarivo, Ravalomanana Lalao tetsy amin’ny Carlton Anosy, ipetrahany amin’izao fivahinianana izao, i Ban Ki-moon. Nifampiresaka minitra vitsy ny roa tonta. Nihaona tamin’ireo mpiasan’ny ONU etsy Andraharo ny tenany avy eo ary nitohy amin’ny fiaraha-misakafo teny Iavoloha.
Hentitra ny fiambenana sy ny fitandroana ny filaminana
Hentitra ny fitandroana ny filaminana sy ny fiambenana azy, hatramin’ny nigadonany teny Ivato sy tamin’ireo toerana nolalovany. Niditra an-tsehatra avokoa ireo mpiambina manokana manao fanamiana sivily. Eo koa ireo havanana amin’ny tifi-davitra (tireur d’elite) avy amin’ny Vondron-kery manokana natao hiaro olom-panjakana. Manampy izany ny sidina nataon’ny angidimby nanaraka ny fiara nandehanan’ny vahiny. Nahitana fiara 4×4, ahitana ny Emmo/Reg miantsona teny an-dalana teny, ankoatra ireo polisy sy zandary mandrindra ny fifamoivoizana.
Na izany aza, manana mpiambina azy manokana maromaro koa i Ban Ki-moon, ankoatra ireo mpiasan’ny ONU, ampolony.
Handao an’i Madagasikara, anio hariva avy hatrany ny tenany sy ireo delegasiona tarihiny taorin’izao fitsidihany taty amin’ireo firenen’ny ranomasimbe Indianina izao.
Sary sy soratra : Synèse R. sy Mamiherison